Racfaan laga qaatay xukunkii caawinta ee is dilka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dacwad lagu dhawaaqay in abiil laga qaatay, lana socon doono illaa iyo maxkamadda sare. sawir: Mats Andersson / TT
Racfaan laga qaatay xukunkii caawinta ee is dilka
La daabacay tisdag 26 november 2019 kl 16.50
Go’aankii maxkamadda Ångermanland ee sannadka iyo barka ahayd oo ay ku riday nin islaantiisa ku caawiyay inay geeriyooto markii uu ku duray muqaadaraadka marfiinta oo dheeri ah ayaa racfaan looga qaatay maxkamadda Hovrätten ee nedre Norrland.
- Waxaannu aaminsannahey in oodda laga qaado, waa fal u baahan in loo qiimeeyo inuu taageerayay qof doonayay inuu is dilo, sida uu sheegay garyaqaanka ninka dacwadda lagu soo oogey Thomas Bodström oo la hadlay wakaaladda wararka Sweden ee TT.
Ninkan oo da’diisu tahay lixdameeyo ayaa qirtay falka uu geeystay, hase yeeshee iska dheereeyey inuu dembi galay. Iyadoona haweenaydu (xaaskiisu) xanuunsanayd muddo sannooyin ah ay si cad u sheegatay inay doonayso inay nolosheeda soo af jarto. Isla fiidkii uu ninkeedu ku durayay morfiinta dheeriga ah, bishii maarso ee 2019 ayay iska duubtay filin macsalaameeys ah, dabadeedna isku dayday is khaarajin ay ku guul darreeysatay. Halka uu markaa dabadeed uu ninku ku duray morfiinta.
Maxkamadda degmada ayay ula muuqatay inuu ninku si madax bannaan falka u sameeyay, middaasina oo aan loo qiimeeyn karin gacan siin qof doonaya inuu nafta iska jaro. Sida ay maxkamaddu ku qortay go’aankeeda.
Qareenka Thomas Bodström ayaa kolka ay dacwaddani timaado maxkamadda racfaanka u soo qaadan doona markhaati kiis ay horay u gaartay maxkamadda sare sannadkii 1996. Kiiskaasina oo gabar ay ku geeriyootay kolkii ay hooyadeed siisay kiniiniyo, isla markaana xukunkii laga qaaday.
Thomas Bodström ayaa sheegay in haddii ay maxkamadda racfaanku xukunka ay ka masixi waydo ninkan uu abiil uga qaadan doono maxkamadda sare, sida uu sheegay.
Maxaad u taqaan: Racfaan, mise Rafcaan?